Ku dhawaad 100 qof oo cudurka Ebola ugu geeriyootay dalka Cong – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaKu dhawaad 100 qof oo cudurka Ebola ugu geeriyootay dalka Cong
Ku dhawaad 100 qof oo cudurka Ebola ugu geeriyootay dalka Cong
11/02/2019 B M Arimaha Bulshada, Wararka, Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, War ay soo saartay Hay’adda Save The Children ayaa lagu sheegay in Ku dhawaad boqol carruur ah oo ku nool bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay ugu dhinteen cudurka Ebola,iyadoo laga cabsi qabo in ay sii kororto.
Save the Children oo ah Hay’adda samafalka ee ka shaqeysa arimaha caruurta ayaa ka digaysa in haddii aan degdeg wax looga qaban xanuunkaasi ay qaadan doonti ilaa sanad in lala tacaalo,waxaana soconaya dadaalo xoogan oo looga hortagayo fiditaanka cudurkaasi.
Dalka Conga ayaa la sheegaya In guud ahaan tirade dhimashada ah ay gaarayso ilaa shan boqol oo qof oo la xaqiijiyay in ay cudurka Ebola ugu dhinteen dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo,dowladda Congo ayaana sheegaysaa in cudurkan uu yahay kii ugu ballaarnaa ee abid soo mara dalkaasi.
Warka ay soo saartay Hay’adda Save the children ayaa sidoo kale lagu sheegay in mid ka mid ah shantii qof ee uu cudurka ku dhacay uu yahay ilmo u badan kuwa ka yar da’da shan jirka.
Wadanka Dalka Congo ayaa marar badan la tacaalay cudurka Ebola,hase ahaatee waxaa la sheegayaa in xaaladda haatan ay tahay midi ugiu darnayd abid soo marta dalkaasi.
Dhanka kale maleeshiyaadka ka dagaalama dalkaasi Condo ayaa la sheegayaa in ay caqabad ku yihiin amniga dadka dhaqaatiirta ah ee la tacaalayaa cudurkaasi,taasi oo keenysaa in ay is hortaagaan howlwadeenada caafimad.
Dowladda Federaalka oo sheegtay iney dadaal ugu jirto sidii loo soo saari lahaa Kheyraadka dabiiciga ah